သတင်းမော်ကွန်းတိုက် |4၏စာမျက်နှာ7| NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: သတင်း (စာမျက်နှာ 4)
BirdDog သည် NAB 2018 ၌ BirdDog Mini ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်း၏အသေးငယ်ဆုံးအပြည့်အဝ Bitrate HDMI မှ NDI Encoder
အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်များအတွက်ဒီဇိုင်း, BirdDog Mini ကို 1080p မဲလ်ဘုန်းမြို့သြစတြေးလျ (ဧပြီ 60, 8) မှတက် SD ကထဲကနေ 2018p နှင့် frame rate ရန်, အားလုံးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည် - BirdDog (www.bird-dog.tv) ယနေ့အပြည့်အဝစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အသေးငယ်ဆုံး, အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကြေညာခဲ့သည် NDI မှဘစ်နှုန်း HDMI; အဆိုပါ BirdDog Mini ကို။ အဆိုပါ BirdDog စတူဒီယို NDI အန်ကုဒ်နေသူများကဖန်တီးသောအဖွဲ့ကတီထွင်ခြင်း, BirdDog Mini ကိုစီစဉ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ် ...
LiveU LiveU Matrix နှင့်အတူလူငယ်ကဏ္ဍအတွက် IP / အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြည့်ပံ့ပိုး & ဖြန့်ဖြူး၏နယူးအဆင့်ဘဝမှကယျတငျ
LiveU Matrix မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်တိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာ, ရှုမြင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖို့ထုတ်လွှင့်အားဖွင့်, IP ကိုကျော်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုအလှူငွေများနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့မျိုးဆက်သစ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြောင်းလဲနေသောမိုဃ်းတိမ်ကိုပလက်ဖောင်းတဦးတည်းကို interface မှတဆင့်အကြောင်းအရာ curate ကရိုးရှင်းစေသည်။ အသုံးပြုသူများကိုအလွယ်တကူ, filter ကိုရှာဖွေ preview ကိုနှင့်တဦးတည်းဘူတာရုံ, မျိုးစုံဘူတာ, ဒါမှမဟုတ်အဆုံးမှတ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ feeds တွေကိုဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ် ...
LiveU မိတ်ဆက်စျေးသက်သာကို Global IP ကိုဂြိုဟ်တုဝန်ဆောင်မှုဆယ်လူလာအိုင်ပီဆက်သွယ်မှုဖြည့်စွတ်ရန်
LiveU လွယ်ကူပြီးပိုကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောသူတို့ဤလောက၌ဖြစ်ကြ၏နေရာတိုင်းမှာဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ LiveU ရဲ့ HEVC Bond နည်းပညာပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့်အသက်ရှင်ဖောက်သည်သတင်းနှင့်ဖြစ်ရပ်များကိုဖုံးလွှမ်းရန်အဘို့အစေတော်မူပြီ။ ယခုဤဖောက်သည် "နှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာရဲ့အကောင်းဆုံး" ပေးသည် - သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်ကိုက်ညီမယ့်အားကောင်းတဲ့စပ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြေရှင်းချက်သည်လုပ်ငန်းအသွားအလာ streamlines နှင့်, ငွေတောင်းခံဖွဲ့စည်းပုံမှာရိုးရှင်းစွာ။ ...
TVK ကမ္ဘောဒီးယားက၎င်း၏နေ့စဉ်သတင်းလွှမ်းခြုံ Enhance မှ LiveU ရွေးချယ်
TVK, ကမ္ဘောဒီးယား Kampuchea ၏အမျိုးသားရုပ်မြင်သံကြား (TVK), ပြီးခဲ့သည့်လကရဲ့သုံးရက်ကြာရေပွဲတော် ( "ဘွန် Om Touk") ကိုဖုံးလွှမ်းရန်အကုမ္ပဏီ၏ LU600 HEVC ဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. ပြီးနောက်၎င်း၏နေ့စဉ် newsgathering များအတွက် LiveU ရွေးခဲ့သည်။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်ဖြစ်ရပ်မှာ On-site ကိုထောကျပံ့ပေးရာ LiveU ရဲ့ထိုင်းဖက်နဲ့ DSC ကစီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသည်။ LiveU ယူနစ်အသုံးပြုခြင်း, TVK ရဲ့ကင်မရာအမှုထမ်းဖန်တီးမှုအဆိုပါပွဲတော်ဖမ်းမိ ...
SAM ကို New York မြို့ရဲ့ SVG ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် NewsTECH ဖိုရမ်မှာပေါင်းချုပ်သတင်းနှင့်အားကစားဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုသရုပ်ပြရန်
နယူးယောက်, 11 ဒီဇင်ဘာလ 2017 - ဆမ် (Snell အဆင့်မြင့်မီဒီယာ) ယနေ့က New York မှာနှစ်ဦးစလုံး SVG ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် NewsTECH ဖိုရမ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူမှတဆင့်ဒီဇင်ဘာလ 11-12 အားကစားအတွက်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်သတင်းဗီဒီယိုကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးသရုပ်ပြလိမ့်မည်ဟုကြေငြာလိုက်သည်။ "ဒီနှစ်ခုမှာအရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များတက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းနှင့်အားကစားနှစ်ဦးစလုံး၌အကြှနျုပျတို့၏ပေါင်းစပ်ခေါင်းဆောင်မှုဖွဘယ်လိုတခုအဖြစ်ခွင့်ပြု ...
LIVEU အင်တာမီလန်ပျား 2017 စမ်းကြည့်ရန်
Ltd. , Sanshin အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီ, - ခန်းမ5/ Booth 5110 LiveU, အသက်ရှင်သောဗီဒီယိုတော်လှန်ရေးကားမောင်းတီဗီများအတွက် streaming တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုပေး, မိုဘိုင်း, အွန်လိုင်းနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာသည်။ အင်တာမီလန်ပျား 2017 မှာ LiveU ယင်း၏ဂျပန်မိတ်ဖက်ရဲ့တဲထဲမှာ IP ကိုကျော်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုရှာမှီး, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖြေရှင်းချက်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်အကွာအဝေးဖေါ်ပြခြင်းလိမ့်မည်: Sanshin အီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd မှတဲ (ခန်းမ ...
Dalet နှင့်အတူသြစတြေးလျထုတ်လွှင့် SBS ရဲ့စီဘီချဲ့သဘောတူညီမှုရ
SBS အားလုံးရေဒီယို, တီဗီနဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းစင်္ကာပူတလွှား orchestration နဲ့ content ပူးပေါင်းချဲ့ထွင်ရန် Dalet နှင့်အတူလက်တွဲ ပို. ရငျ့ - အောက်တိုဘာလ 3, 2017 - Dalet, ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ပညာရှင်များအဘို့အဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးကြောင်းသြစတြေးလျရဲ့အထူးအသံလွှင့်ဌာန (SBS) ထုတ်ပြန်ကြေညာ သိသိသာသာ Dalet က Galaxy မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းအားဖြင့်၎င်း၏မီဒီယာလုပ်ငန်းများ (ပေးခဲ့သည်) ၏အဘို့ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်နေသည် ...
Dalet IBC2017 မှာသတင်းနှင့် orchestral Workflows အတွက်နောက်ဆုံး Advanced ကိုရည်ညွှန်းပြသ
ပဲရစ်, ပြင်သစ် - သြဂုတ်လ 3, 2017 - Dalet ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစနစ်များ, ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ပညာရှင်များအဘို့အဖြေရှင်းချက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဦးဆောင်ပေးသူသည်အမ်စတာဒမ်မှာကျင်းပ 2017 IBC Show မှာမိတ်ဆက်တော်တော်များများနည်းပညာအသစ်တိုးတက်မှု (8.B77 ရပ်), ဖွစျလိမျ့မညျ 15th မှတစ်ဆင့်စက်တင်ဘာလ 19th ထံမှ RAI ရေးစင်တာ။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက် Key ကိုထွန်းသစ်နည်းပညာများ၏အားသာချက်ယူနိုင်စွမ်းသည် ...
4 ၏စာမျက်နှာ 7«ပထမဦးစွာ...«23456 » ...နောက်ဆုံး»